Tuesday March 28, 2017 - 13:35:27 in Wararka by Super Admin
Warbaahinta caalamka ayaa diiradda saaraysa gurmadka baaxadda leh oo ay xarakada Al Shabaab u fidinayso shacabka Soomaaliyeed ee abaaruhu saameeyeen.
Hay'adda Warbaahinta ingiriiska ee BBC ayaa warbixin ay diyaarisay ugu kuur gashay gurmadka ay fidinayaan wilaayaatka islaamiga ah, telefeshinno iyo Wargeysyo caalami ah ayaa iyana warbixinno ka diyaariyay gargaarka isdaba joogga ah ee Xarakada Al Shabaab u fidinayso kumanaan qoys oo abaaruhu baabi'iyeen ilahoodii dhaqaalaha.
Sidoo kale warbaahinta jihaadiga ee Afka carabiga wararka ku faafisa ayaa soo daabacday sawirro muujinaya Al Shabaab oo ugurmanaysa dadka dhibaataysan.
Majallad ku hadasha Afka Ururka Al Qaacidda ayaa ammaan ballaan ujeedisay wilaayaatka Islaamiga ah sida ay xilka isaga saareen ugurmadasha dadka abaaruhu saameeyeen.
Hoos Ka Akhriso Warka Majallada Al.Nafiir ee Al Qaacidda ku ammaantay kaalinta gurmadka abaaraha ee Al Shabaab.
Wakhti ay abaartu aafeyneyso dhulka Soomaaliya, Shacabka halkaas ku nool kama helin Dowladaha reer galbeedka iyo Ciidamada Afrikaanka ah ee soo duulay baad ay nafta ku ceshtaan ama biyo ay dhuunta mariyaan oo ay haraadka uga oon baxaan, iyagoo sheegtay inay u yimaadeen bad-baadinta Shacabka Masaakiinta ah, ayna ka saaraan Xaaladda Faqriga ah ee ay ku jiraan, ayna gaarsiiyaan heer ay ku damaashaadaan Amni iyo barwaaqo.
Si taas ka duwan waxaan arkeynaa Xarakada Al Shabaab oo mar walba ku dhawaaqeysa ol-ole ay ugu gar gaarayaan dadka Muslimiinta ah ee ay aafeeyeen abaaraha, xilli Xukuumadda dabadhilifka ah iyo Ciidamada Gumeysiga ah ee soo duulay ay Mujaahidiinta ku eedeynayaan xagjirnimo iyo inay dhibaateynayaan Shacabka.
Xarakada Shabaabul Mujaahidiin waxay biyo gaarsiisay deegaanada ay abaartu saameysay ee kuyaalla Koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, gaar ahaan gobollada Mudug, Hiiraan, Shabeellaha dhexe, Shabeellaha hoose, Baay iyo Bakool iyo Gedo.
Dhanka Gargaarka Raashiinkana, waxay Xarakadu Gobollada Galgaduud iyo Mudug ee bartamaha Soomaaliya Raashin gargaar ah ugu qeybisay Kumanaan qoysas ah oo la il daran abaaraha.
Gobolka Shabeellaha hoosana, waxay Mujaahidiintu gar gaar gaarsiiyeen Boqollaal qoysas ah oo ku nool deegaanka "Kuunyo-Barow" iyo tuulooyinka hoos yimaada, waxayna weli Mujaahidiintu ay wadaan howlaha ay gurmadka ku gaarsiinayaan dadka ku nool deegaanada ay saameeyeen abaaraha.
Walaalaheenna Soomaaliyeedow, wakhtiga ay dhibaatada jirto ayay soo muuqataa xaqiiqda sheegashooyinka, waxaadna aragteen sida ay wiilashiinna Mujaahidiinta ah ay ula tacaamuleen dhibaatada abaaraha Sanadihii lasoo dhaafay iyo sanadkanba.
Laakiin Xukuumadda daba dhilifka ah waxay weli magan u tahay Dowladaha soo duulayaasha ah ee qaarkood sababta u ah dhibaatada idin heysa, sida Itoobiya oo kale, taas oo idinku dhibaateysay biyo xireennada ay ka sameysay Webiga Shabelle.
Walaalaheenna Muslimiinta ahow, u deg dega caawinta walaalihiinna dhibaateysan meel walba oo ay joogaan, waxaadna xaqiijisaan mafhuumka Umadda midka ah.
Wuxuu leeyahay Midkii Jeclaa Umaddiisa Sheekh Usaama -Alle ha u naxriistee- " waxaa mudan in lagu baraarugo mas'alo ka mid ah midda ugu daran ee nagula dagaallmay, sababna u noqotay inay yaraadaan kaalmada gar gaarka ah ee la gaarsiiyo dadkii u baahnaa, -mas'aladaasi waxay tahay- in nagula beeray Waddaniyadda Qurunka ah, taas oo kasoo soke martay mabdi'ii Umaddii wadajirka aheyd. Imkaaniyaadka dhaqaale ee yaalla Jaziiradda Carabta waa hanti ay leeyihiin Muslimiinta, laakiin sida waaqica ah waxaan arkeynaa in lagu bixinayo meel aan ku munaasab aheyn, laguna talax tagayo, xilli in badan oo Muslimiinta ka mid ahna ay dhibanayaal u noqdeen daadad, Cudurro, iyo Gaajo, Awood iyo xeelad ma lihin oo aan Alle aheyn!".
Halkan ka akhri warbixin BBC ay ka qortay Gurmadka Abaaraha wilaayaatka islaamiga Soomaaliya.